एक बोतलकै १ करोड ४ लाख पर्ने यो कस्तो पानी ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
एक बोतलकै १ करोड ४ लाख पर्ने यो कस्तो पानी ?
एक बोतल पानीको मुल्य कति रुपैंया पर्ला ? प्रायः पसलमा किनेर पिइने पानीको मुल्य नेपालमा त्यस्तै २० देखि २५ रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । तर, संसारमा सबैभन्दा महँगो पानी अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा ‘बेवर्ली हिल्स’ले उत्पादन गर्ने गर्दछ । ‘बेवर्ली हिल्स’ले एक बोत्तल पानीको मुल्य एकलाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव एक करोड चार लाख नेपाली रुपैंयाँ तोकेको छ । जुन सर्वसाधारणका लागि प्रायः असम्भव जस्तो देखिन्छ । बिभिन्न कम्पनिले उत्पादन गरेका महँगो मदिराभन्दा पनि धेरै मुल्य पर्ने यस पानीलाई संसार कै सबैभन्दा महँगो पानी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनिका अनुसार ‘बेवर्ली हिल्स ९०एच२०’ नाम राखिएको यस पानीको मुल्य यसमा प्रयोग गरिएको बोतलका कारण महँगो भएको हो । यस पानीको बोत्तलमा १४ क्यारेट्सको ६ सय वटा हिरा तथा २ सय ५० वटा कालो मोतीलाई कालिगढले आकर्षक ढंगले सजाएका छन् । त्यस्तै, पानीको बोतलको बिर्को २४ क्यारेट्सको सुनले बनेको छ भने बोतललाई चारओटा क्रिस्टलको बालाले घेरिएको छ ।
अमेरिकी पानी ब्यापारी मार्टिन रैजको पानी बिकाउने कलालाई प्रसिद्ध कालिगढ मारियो पडिल्लाले बोतलको डिजाइन गरेर साकार बनाएको कम्पनिले उल्लेख गरेको छ । ‘लस एन्जल्स’को पहाडी इलाका ‘बेवर्ली हिल्स’को माथील्लो सतहको झरनाबाट विशेष प्रविधिबाट संकलन गरिएको शुद्ध पानीलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट ‘अर्डर’ गर्न सकिने कम्पनिले जनाएको छ ।
६६ वर्षदेखि पालिएको विश्वकै लामो नङ्ग काटियो
महिलाहरु श्रीमानसँग के के कुरा लुकाउँछन् ?